Intengo Engabizi kakhulu Yobulili Bocansi
Onodoli bezocansi abancane abathengiswa ngosayizi wempilo
Onodoli bezocansi abangempela bangakusiza ukunqoba isizungu. Bangakunika izinzuzo eziningi, ungakhetha ukuhlala phansi ngenkathi ujabulela isipiliyoni. Akudingeki ukuthi ucindezeleke kakhulu ukulawula ukuphuma kwe-ejaculation. Ungajwayeza udoli kaningi ngangokunokwenzeka ukuze ube ngumngane ophelele futhi ulungiselele uthando lwesikhathi esizayo nentombi yakho. Ungazama izitayela ezahlukahlukene futhi akasoze akhononda. Bangakunika ukuzethemba okudingayo othandweni, ngaphandle kokuthembela kumlingani wakho noma kumlingani wakho ukuletha isifiso sakho sobulili emvuthwandaba wempumelelo. Kepha ukuthola unodoli wezocansi ongafanele kungumsebenzi owesabekayo.
Uma ufuna ukunethezeka okuphezulu abicah unodoli wezocansi ongokoqobo, sihalalisela endaweni efanele. Onodoli bethu benziwa ngokuya ngesilinganiso sabantu bangempela. Ngenxa yezinga eliphezulu lokulingisa, kunzima ukuhlukanisa umehluko kumuntu wangempela. Sisebenza kahle ngemininingwane yokucubungula, iyintshi ngalinye likanodoli liqoshwe ngesandla ngumbazi oqeqeshiwe. Ukuthungwa kwesikhumba kwezandla nezinyawo nakho kubonakala ngokusobala futhi kunengqondo impela. Izinto ezingabicah ezisetshenzisiwe ziphephile futhi azinambitheki, zinokumelana nokushisa okuphezulu, azikhubazeki kalula futhi zaphukile, futhi kulula kakhulu ukuzihlanza. Silwazisa kakhulu ulwazi lwamakhasimende. Ukuqashelwa kwamakhasimende kungukusekelwa kwethu okukhulu kakhulu. Ukuletha injabulo kumakhasimende ethu kungamandla ethu okushayela. Lapho efika ekhaya lakho, ngeke udumazeke. Uzobona ukuthi lokhu kungukutshalwa kwemali okuhle.
Intengo yamadonki ethu abicah angabiza kancane ngoba anekhwalithi ephezulu kunayo yonke eminye imikhiqizo. Futhi zingokoqobo futhi zihlala isikhathi eside. Lokhu kuye kwabonwa futhi ngabasebenzisi abaningi, onodoli bezocansi abahamba phambili kufanele bazizwe futhi babukeke bengokoqobo ngangokunokwenzeka. Onodoli abathanda ukhwaliti abasezingeni eliphakeme abagcini ngokunikeza abantu ulwazi olungokoqobo, kepha futhi basiza ukusindisa izimpilo zocansi zabantu abaningi. Ungenza ngokwezifiso umlingani wakho wokuphila esitolo sethu ngokuya ngokuthanda kwakho.
ULisa-WM Fat Body Umuhle Izinwele Ezinde F-inkomishi Amakhulu amaTits Sexy Adult Doll
IWarren - 165CM D-inkomishi WM NO.85 Abicah Head Head Skin TPE Sex Doll
UGabrielle - 148CM Big Boobs Chinese Silicone Head TPE Body Sex Doll
USara - 156CM Isitayela Sase-Asia Sabona Abesilisa Abesilisa
I-172CM Motooka Mayumi Silicone Pure Japanese Love Doll Amabele Amakhulu
I-Jocelyn Cissie eyi-Pure ne-Charming 146cm ye-Silicone Yabesilisa
Thenga idoli yangempela yocansi abicah ngentengo eshibhile
Ividiyo mayelana nokuthi ungalungisa kanjani onodoli bezocansi abicah:
Ungathenga onodoli bezocansi abenziwe ngezifiso ngokuphelele
Eminyakeni embalwa edlule, i-Intanethi ibigcwele izindatshana ezikhuluma ngokuvulwa kwezindawo zokudayisa ngomzimba zonodoli besilisa, imvamisa kube nempumelelo enkulu ngaphambi kokuvala noma ukuvala. Ngakho-ke, umbuzo uwukuthi, ingabe amaphayona alezi zinkampani alugingqile udonga lomkhakha ose-v ...
Jabulela i-pose yakho yodoli oyithandayo
Ungajabulela isigqi sempilo yakho kanye nempilo yezocansi, ukujabulela noma yikuphi ukuma okuthandayo, ungafaka iminwe yakho emlonyeni wakhe, noma ungambamba amabele ukuqedela ukuya ocansini, njengalokho okwenzile kwabesifazane phambilini. Akasoze athi cha kuwe, noma kunzima kangakanani, uzimisele ukwenza ini ...
I-Seoul Football Club izama ukungeza ubumnandi emdlalweni ongeyona isibukeli
Ithimba lathi: "Sikuqinisekisile ukuthi yize la ma-mannequin onodoli bezocansi bebukeka njengabantu bangempela, asihlangene nakancane nemikhiqizo yabantu abadala." Kepha kubonakala sengathi abahlinzeki babo babanikeza onodoli bezocansi. Ababukeli baqaphele ezinkundleni zokuxhumana ukuthi abanye babalingisi bebegqoke imvunulo eno-se ...